Isatifikethi | I-BAODING YINGTESHENG BRISTLE KUNYE NE-BrUSH MAK CO., LTD
Ipeyinti ye-DIY yebrashi
Inayiloni kunye nePolyester yepeyinti yebrashi
I-Chalk kunye neWax Paint Brush
Umzantsi Melika Wentengiso
Ukusukela i-YTS iqalile kumasifundisane osapho oqhelekileyo e-Baoding, e-Hebei kwi-1990, bekuqwalaselwe isitayile solawulo "soMgangatho ngaphezulu kwako konke". Ekuqaleni, ishishini eliphambili le-YTS yayikukuthengisa i-bristle ebilisiweyo, kwaye kungekudala yaba kuphela komthengisi we-Beijing Brush Factory.
Ukuze ukhuphisane ngakumbi, i-YTS ifumene iBeijing Factory yeBrush kunye negama layo "iWall Wall" ngo-2016. Kule nto ifunyenweyo, i-YTS yenza enye inkqubela phambili ebonakalayo kungekuphela nje kwiinkqubo zokuvelisa kodwa nakwizabelo zentengiso zasekhaya.
Ngo-2005, ukuqaliswa kwetekhnoloji kunye noomatshini kwavumela i-YTS ukuba yandise ishishini layo ukupeyinta indawo yebrashi. Kwakuloo nyaka, i-YTS yaseka ikomkhulu layo-umvelisi kwiQingyuan Industrial Park, indawo yedolophu yaseBaoding, eHebei. Ihlala ngaphezulu kweenyawo ezingama-700,000 zeenyawo, ezenziwe sisityalo sokwenza i-bristle ebilisiweyo, isityalo sokuzoba intambo, isebe lokwenza isiphatho, isebe lokwenza ibrashi.
Emva kweminyaka yokuziqhelanisa, i-GB / T 19001-2016 / ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, i-GB / T 24001-2016 / ISO140001: Inkqubo yezendalo ka-2015 isekiwe kwaye sele idlulisile ukuqinisekiswa kweshishini elamkelwe kwilizwe liphela iWCA kunye ne-SQP.
IYTS inabasebenzi abangaphezu kwama-300, kubandakanywa abayili abaziingcali, iinjineli. Sinobuchule bokuvelisa izinto ezintsha kunye neemveliso ukubonelela abathengi ngeemveliso ezilungileyo. Sikwanonikezelo olukhawulezayo kunye nenkonzo yasemva kwentengiso ukuphucula ukhuphiswano lwethu. Sikhonza abathengi bethu ngendlela ehambelana nexesha. Eyona njongo iphambili yeYTS kukuqhubela phambili ukuphuhlisa iimveliso ezintsha, ukuphucula umgangatho, ukunciphisa iindleko, kunye nokunikezela ngeemveliso ezilungileyo kubathengi ngexabiso elinokhuphiswano.
Kutheni ukhetha iYTS?!
Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu, "umgangatho ongaphezulu kwako konke" uhlala uqeqeshiwe kwingqondo yomqeshwa. Iibhulashi zethu ezikumgangatho ophezulu zifumana ulwamkelo olufudumeleyo kubathengi kwihlabathi liphela.
I-YTS inabasebenzi abangaphezu kwama-300 ngokuveliswa kweebhokisi ezingama-20,000 kunye nezigidi ezingama-30 ngonyaka. Uninzi lwebrushmaker zeYTS zinamava angaphezu kwamashumi amabini eminyaka, zithatha ezona zinto zintle zenziwe zaza zajika zaba zezona brashi zintle ezikhoyo.
Imeyile: sophia@ytsbristle.com (Paint Brush INFO)
Imeyile: bourne@ytsbristle.com (Izinto ze-Brush INFO)
Idilesi: NO.32 YUANQU ROAD, ISITHILI SEQINGYUAN, BAODING, HEBEI PROVINCE, CHINA